Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah Baydhaba uga furay shirka golaha amniga - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah Baydhaba uga furay shirka golaha amniga
Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah Baydhaba uga furay shirka golaha amniga
Baydhabo (Caasimadda Online) – Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa goor dhow magaalada Baydhabo ka furay shirka Golaha Amniga Qaranka oo ay ka qeyb galaan Madaxda ugu sareysa dalka, Maamul goboleedyada, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Gobolka Banaadir.
Qodobada looga hadlayo waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka,Isku dhafka Ciidanka iyo hirgelinta Nidaamka Federaalka ah ee uu hadda ku jiro dalka.
Shirkan waxaa uu horudhac u yahay shir isla Bishan ka dhacaya Magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka kaas oo looga hadlayo amniga Soomaaliya.
Waxaa ay madaxda Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada isla meel dhigayaan qorsha iyo ajendaha ay la hortagayaan Waddamada taageera Soomaaliya ee ka qeybgelaya Shirka Brussels ka dhacay.
Waa shirkii Todobaad ee Guddiga Amniga Qaranka ay yeeshaan,waxaana uu dhacaa saddexdii biloodba mar iyada oo markan ay marti gelineyso Magaalada Baydhaba ee Xarunta KMG u ah Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Amaanka Magaalada Baydhaba ayaa aad loo adkeeyay waxaana la yareeyay dhaq dhaqaaqa Gaadiidka iyada oo meelaha qaarna la xiray si aanay u marin dadka iyo Gaadiidka.